China Hydrogen Kugadzira Inoshandura Fenicha Vagadziri uye Vanotengesa | Dongfang
Tsananguro Yeiyi hydrogen kugadzira chirairo, hydrocarbons anoshandiswa sezvinhu zvakasvinwa, uye mbishi zvekuumbwa kweammonia uye hydrogen zvinogadzirwa nekuchinja kwesimba. Aya mahydrojeni enzvimbo ane chinzvimbo chakananga muzvikamu zvemaindasitiri senge ammonia synthesis, mafuta anonatsa, petrochemicals, uye simbi. Iyo vara rekushandura ndiyo shanduri yekushandura uye yakakosha kiyi ye hydrogen yekugadzira unit. Mhando iyi yekudhirowa yakagadzirirwa sekudziya ...
Kune ino hydrogen kugadzirwa muchoto, hydrocarbons anoshandiswa sezvinhu zvakasvinwa, uye mbishi zvekuumbwa kweammonia uye hydrogen zvinogadzirwa nekuchinja kwesimba. Aya mahydrojeni enzvimbo ane chinzvimbo chakananga muzvikamu zvemaindasitiri senge ammonia synthesis, mafuta anonatsa, petrochemicals, uye simbi.
Iyo vara rekushandura ndiyo shanduri yekushandura uye yakakosha kiyi ye hydrogen yekugadzira unit. Mhando iyi yeakonzuru yakagadzirirwa sevira rekudziisa mukati maro iyo inosimbisa yakaiswa mune imwechete yekugadzirisa tube. Iyi hydrogen vira inoveserwa zvakananga uye maitiro epakati anogadziriswa kuburikidza nemubhedha unoshungurudza muburi revira. Mamiriro ekushanda akaomarara anoita kuti iyi hydrogen kugadzira vira rekushandura kuve rakasiyana nemamwe machira ane maitiro akadai seyechoto chivako, chando chubhu zvinhu, kutsigira pombi system, pombi system kushushikana, flue gasi kuyerera uye kugovera, zvinoshandiswa Ref Refory, nezvimwe.
10,000Nm3h Hydrogen Kugadzira Shanduri Ificha
20,000Nm3h Hydrogen Kugadzira Shanduri Ificha
30,000Nm3h Hydrogen Kugadzira Shanduri Ificha
60,000Nm3h Hydrogen Kugadzira Shanduri Ificha
Yapfuura: Hydrogenation Fenicha
Inotevera: Kubika Ificha
Rail Transit , Malo Chikamu cheKuisa , Kuderedza Block , Ironworks , Railway Kukurukura , Chill Mvura Muchina ,